Rstudio IDE yeiyo R programming mutauro muLinux | Kubva kuLinux
Rstudio IDE yeiyo R programming mutauro paLinux
RStudio inzvimbo yakabatanidzwa yekuvandudza (SDI) yeiyo R programming mutauro, wakazvipira kune nhamba yecomputer uye mifananidzo. Inosanganisira koni, syntax mupepeti inotsigira kuitisa kodhi, pamwe nematurusi ekuronga, kugadzirisa uye nekugadzirisa nzvimbo yebasa.
RStudio inowanikwa yeWindows, Mac neLinux kana mabhurawuza akabatana neRStudio Server kana RStudio Server Pro (Debian / Ubuntu, RedHat / CentOS, uye SUSE Linux). RStudio iri pachinangwa chekupa iyo Statistical komputa nharaunda.Iyo inogonesa kuongorora uye kusimudzira kune chero munhu kuongorora data naR.
Iyo IDE inowanikwa mune desktop uye server kumisikidzwa. Nekugadzirisa iyo server kumisikidzwa (RStudio Server) pane Linode, unogona kuwana iyo IDE kubva kune chero komputa ine Internet kuwana.
Sezvo ongororo yedata ichiwanzoshandisa yakakura seti yedhata uye inogona kuverengeka inodhura, kuchengetedza yako data uye kumhanya R zvinyorwa kubva kune iri kure server zvinogona kushanda zvakanyanya pane kushanda kubva kune yako wega komputa.
Uye zvakare, yehunyanzvi vhezheni inowanikwa iyo inobvumidza kugovana kweprojekiti uye kugadzirisa kodhi panguva imwechete kune vashandisi vazhinji
Pakati pezvakakosha zveRstudio tinogona kusimbisa zvinotevera:
IDE yakavakirwa chete R
Syntax inosimbisa, kodhi auto kupedzisa uye smart induction.
Mhanya R kodhi yakananga kubva kunobva kodhi kodhi mupepeti.
Kurumidza kusvetuka kune zvakatsanangurwa mabasa.
Zvinyorwa uye rutsigiro rwakabatanidzwa.
Rakareruka manejimendi eakawanda mabasa madhairekitori kuburikidza nemapurojekiti.
Kufamba munzvimbo dzebasa uye muoni wedata.
Kunyora zvine simba uye kugadzirisa dambudziko.
Inopindirana debugger yekukurumidza kuongorora uye kugadzirisa zvikanganiso.
Yakakura yekuvandudza maturusi.
Hunyori neSweave uye R Markdown.
Maitiro ekuisa RS Studio yekuvandudza nharaunda paLinux?
Kune avo vanofarira kuisa iyo RS Studio yekuvandudza nharaunda paLinux, Vanogona kuzviita nekutevera rairo dzatinogovana pazasi.
Kana vari Vashandisi veUbuntu uye vachiri kushandisa 14.04-bit vhezheni 32 LTS kana vashandisi veDebian 8 32-bit, iyo package yeako system inotorwa nekumhanya unotevera kuraira:
Ipo iyo 32 bit server vhezheni iri iyi:
Muchiitiko cheavo vari vashandisi veidzi dzimwe shanduro, asi mu 64 zvidimbu zvekuvakisa pasuru yeako system ndeinotevera:
Iyo 64-bit server vhezheni ndeiyi:
Yenyaya yeavo Ivo vanoshandisa shanduro gare gare kupfuura 14.04 LTS uye vashandisi veDebian 9. Kune imwechete chete 64-bit package, iyo inogona kutorwa pasi nekuita unotevera kuraira:
Kurodha pasi vhezheni vhezheni:
Waita kurodha pasi Iwe unogona kuisa iyi package pamwe neyako inodiwa package maneja kana kubva kune iyo terminal pachayo nekuita unotevera kuraira:
Kugadzirisa chero dambudziko nekutsamira iwe unofanirwa kumhanyisa iwo wekuraira:
Muchiitiko cheavo vanoshandisa iyo server vhezheni, ita zvinotevera:
Zvino nezvenyaya yeavo vari Fedora, CentOS, RHEL, openSUSE vashandisi kana chero kugoverwa kweLinux nerutsigiro rweRPM mapakeji, iro pasuru revashandisi ve32-bit ndeinotevera:
Ipo pasuru yeavo 64-bit system vashandisi vanozvirodha pasi nekuita unotevera kuraira:
Chekupedzisira, kuisa iyo yakadzingwa pasuru pane system, izvi zvinogona kuiswa nekuita unotevera kuraira:
Kune avo vanovhuraSUSE vashandisi, kana vaine matambudziko nemirairo iri pamusoro, vanogona kushandisa uyu murairo kuisirwa.
Pakupedzisira, kuziva zvishoma zvishoma nezve kumisikidzwa uye manejimendi yeserura vhezheni inogona tarisa chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » Rstudio IDE yeiyo R programming mutauro paLinux
David Software akadaro
Ndakaishandisa kashoma uye zvakakwana.
Ini ndakamisa muchina chaiwo nawo wakaiswa. Ndinovimba zvinobatsira kwauri:
Pindura David Software
Adrián Alejandro Rodríguez Villarreal akadaro
Iyo yakanaka IDE yemutauro wechiverengero, muchokwadi iyo chete yandakamboshandisa yeR, kana ini ndisingashandise Rstudio, ini ndinoshandisa R kupindirana kubva paconsole, iyo dzimwe nguva iri nyore.
Ini ndinokurudzira kushandisa iyo R uye Rsutdio docker midziyo inonzi "Rocker", sezvo paine akati wandei mavhezheni anotova nemamwe anowanzo shandiswa mapakeji akatakurwa, uye zvakare shandisa zvirinani multithread uchishandisa openBLAS raibhurari, iyo inovandudza nhanho 3 matrix mashandiro (matrix-matrix )
Pano ini ndinotsanangura zvishoma zvakadzama maitiro ekushandisa docker naR uye Rstudio: https://adrian-rdz.github.io/Docker-Ambiente-Ciencia-Datos/
Pindura Adrián Alejandro Rodríguez Villarreal
Carlos Quantum akadaro
Ndiyo yakanakisa yekumisikidza gwara yandakawana, haimbokundikani, chaizvo ndatenda
Pindura Carlos Quantum
postmarketOS: Kugoverwa kweLinux kunotariswa nharembozha
Waini 4.2: inosvika zviri pamutemo nekukosha kwakakosha kwevatambi